[09 / 10 / 2019] MESİAD - 'ရထားလမ်းစနစ်အားမက်ထရိုအစားမက်ဆီသို့အစားထိုးသင့်သည်'	33 Mersin
[09 / 10 / 2019] အစ္စတန်ဘူလ်ရှိ Metro လေယာဉ်များတိုးမြှင့်ခဲ့သည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
Homeရထားလမ်းKars ရထားဘူတာများတွင် Display ကိုပေါ်ရထားက Black သမိုင်း Steam
19 / 07 / 2018 Levent Ozen ရထားလမ်း, အထွေထွေ, စက်ခေါင်း, တူရကီ 0
ရေနွေးငွေ့ရထား Kars ရထားလမ်းလိုင်းများ
Black ကရေနွေးငွေ့ရထားဘူတာ Kars အတွက် Display ကိုအပေါ်သမိုင်း: တူရကီပြည်နယ်မီးရထားခရီးသည်နှင့်ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး 76 က Black ရထားနှစ်သမိုင်းများတွင်အသုံးပြုနှစ်ပေါင်းများစွာ Kars ရထားဘူတာများတွင်ပြသထားသည်။
မကြာသေးမီကပထမဦးဆုံးမြင်က Black ရထားနှင့်အတူ Orient Express ကို၏သမိုင်း၏အာရုံစူးစိုက်မှု၏အာရုံတို့သည်ဧည့်သည်များအနေဖြင့်အလွန်ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားကိုမြင်လျှင်, Kars မှလာမယ့်။ နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်တင်နှင့်ခရီးသည်များတင်ဆောင်လာသောက Black ရေနွေးငွေ့ရထား, အခြိနျ မှစ. ရုပ်သိမ်းနည်းပညာနှင့်အတူဖြစ်ပေါ်နေသောအဆိုပါရထားလမ်းဘူတာရုံ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ပြခံရဖို့တစ်လွမ်းဆွတ်မှုအတွက်သူတို့တည်ရာအရပ်ခေါ်သွားတယ်။
Kars ရထားဘူတာရုံမှာပြသ, ရေနွေးငွေ့ရထားက Black ကနေပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်ပြင်းထန်သောအကျိုးစီးပွား Kars မီးရထားဘူတာနီးပါးသင်္ကေတဖြစ်ခဲ့သည်ကိုမြင်တော်မူ၏။
Kars အတွက်ခင်းကျင်းပြသ Karabekir Kazim Pasha White က Wagon 16 / 09 / 2013 Kars အတွက်ခင်းကျင်းပြသ Karabekir Kazim Pasha White က Wagon 13 ၏ရုရှားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကာလပြီးနောက်ရုရှားနိုင်ငံနှင့်အတူအောက်တိုဘာလ 1921 15 Kars စာချုပ်အပေါ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ လက်ဆောင် "White က Wagon" အဖြစ် Corps တပ်မှူး Kazim Karabekir Pasha Kars အတွက်၎င်း၏ဧည့်သည်စောင့်မျှော်နေပါတယ်။ 13 မီတာမှာ display ကိုအပေါ်ကားများ၏ကျန်အတွက် Kars ပြတိုက်ရပ်ကွက်အတွင်းအတွက်စခန်းများရှည်လျားဥယျာဉ်, ထမင်းစားခန်း, ရေချိုးခန်းနှင့်ဘွိုင်လာအခန်းတစ်ခန်းတွင်တည်ရှိသည်။ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းညွှန်ကြားရေးမှူး Hakan Doğanay, AA ကို Kars ၏မြို့တစ်ထင်ရှားတဲ့သမိုင်းအထိမ်းအမှတရှိကွောငျးဖျောပွ, သတင်းထောက်တွေကိုကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်သူကတစ်နှစ်အတွင်းမြို့အများအပြားခရီးသွားများဆွဲဆောင်ကပြောသည်။ ပြတိုက်, ကားဥယျာဉ် Doganay တွင်ပြသကြောင်းညွှန်ပြ, ဧည့်သည်များ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင် ...
ခင်းကျင်းပြသသမိုင်းဝင်ခေါငျးလား? အပိုင်းအစပစ်ချခံခဲ့ရသလား? (ဓာတ်ပုံပြခန်း) 25 / 08 / 2013 ခင်းကျင်းပြသသမိုင်းဝင်ခေါငျးလား? အပိုင်းအစပစ်ချခံခဲ့ရသလား? : ရေနွေးငွေ့ TCDD ရထားဘူတာပြခံရဖို့လုပ်တဲ့စက်ခေါင်းများ၏ရှေ့မှောက်၌တည်ရှိသည်, ဖုန်နှင့်လျစ်လျူရှုနှင့်အတူနီးပါးဖျက်သိမ်း image ကိုပေးသည်။ လူအားလုံးတို့သည်ရေနွေးငွေ့စက်ခေါင်းကံမကောင်း TCDD ညွှန်ကြားမှု Gara ကိစ္စတွင်အားဖြင့်ဖျက်သိမ်း Burdur အတွက်ကမ္ဘာပေါ်မှာရေနွေးငွေ့ရထားနိူးခြင်းဖြင့် crowning ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်အနည်းငယ်သာခဲ့သည်ထင်ဖြစ်ကောင်းကျနော်တို့နိုင်ငံမှာဒီအလွန်ကြီးမားသောရေနွေးငွေ့ခေါငျးဥပမာနှင့်ကမ္ဘာကံမကောင်းကားပုပ်ပျက်တတ်မှစွန့်ပစ်ထားတဲ့ image ကိုပေးသည်။ စက်ခေါင်းဖုန်မှုန့်, မြေဆီလွှာ, ဖုန်, အခြို့အပိုငျးသံချေးများနှင့်ပုပ်အတွက်သံချေးအသီးအသီးအခြမ်း, လူစုခွဲရန်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦးအဓမ္မအခွအေနအတွက်လုပ်တဲ့စက်ခေါင်းအင်ဂျင်နီယာတိုက်ခန်း ... ။
Kars, Kars ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးရေးစင်တာနှင့်စစ်ဆေးရေးစခန်းထဲမှာတွေ့ Apaydin 24 / 07 / 2017 TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ İsa Apaydın, ထို Kars ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာလက်ရှိဆောက်လုပ်ရေး Kars စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဘူတာရုံတွေ့ရသော Kars-Tbilisi-ဘာကူစီမံကိန်းကိုအောက်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ လူတွေ Kars ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးရေးစင်တာ၌အလုပ်အကိုင်ဧပြီလ 500 07 2017 အခြေခံအုတ်မြစ်ပေးသွားမှာပါဖွဲ့စည်းထားခြင်းစက်မှုဇုံမှလာမယ့် 300 တထောင်စတုရန်းမီတာပေါ်တွင်တည်ဆောက်လိမ့်မည်။ ပြီးစီးသည့်အခါသူက 500 လူတွေကိုထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးရေးစင်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ employ မည်, Kars ကော့ကေးဆပ်ကျွန်း၏ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအခြေစိုက်စခန်းစေမည်။ TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ İsa Apaydın , AYGM ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Erol ယင်းစစ်ဆေးရေးဘူတာရုံမှာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည် Kars အတွက် Kars-Tbilisi-ဘာကူစီမံကိန်းနှင့်အတူÇıtakအောက်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ Apaydin, ကန်ထရိုက်တာကုမ္ပဏီအရာရှိတွေကအလုပ်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
Balikesir အတွက်နောက်တဖန်အနက်ရောင်ရေနွေးငွေ့ရထား 30 / 08 / 2019 မေလအတွက်Balıkesirအဆိုပါရထားဘူတာကနေပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကတိတ်တဆိတ် Manisa မြူနီစီပယ်ယူနွတ် Emre ငှားရမ်းထားသောတို့နှင့်ကြီးသောတုံ့ပြန်မှုဖြစ်စေတဲ့အနက်ရောင်ရေနွေးငွေ့ရထားနောက်တဖန် Balikesir နောက်သို့လိုက်ကြ၏။ မြို့တော်ဝန် Yucel Yilmaz နှင့်အထက်ပိုပြီးကောင်းမွန်စွာဆောင်ဖို့ဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့သည်သစ်ကိုမြေယာရထားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဆိုပါလက်ထောက်၏ပဏာမခြေလှမ်းများ၏ဖြစ်စေဝေငှကားလမ်းရလဒ်ငှားရမ်း၏နိုင်ငံသားများထံမှတုံ့ပြန်မှုအပေါ်ထို့နောက် Balikesir ၏ Balikesir ယူနွတ် Emre မြူနီစီပယ်အတွက်မြေယာရထား။ အဆိုပါခေါငျးရာအရပျမှာပိုမြင်နိုင်ထားခဲ့ပါတယ် Balikesir ၏မြို့သို့ပြန်သွား၏။ xnumx'l သတ်မှတ်ထားသောတစ်နှစ်၌ပြစ်မှားမိသည်အလုပ်၏နာရီအတွင်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1930 130-တစ်တန်ရေနွေးငွေ့ခေါငျးအလေးချိန်အရပျ၌ထားခဲ့ကြသည်5တစ်ဦးကရိန်း၏အကူအညီနှင့်အတူကိုပြင်ဆင်ရလဒ်များ။ Balikesir ...
တူရကီအိုလံပစ်ဓာတ်ပုံတွေ Taksim Metrosu`N အတွက်ပြသထားပါသည် 25 / 06 / 2012 ယနေ့နိုင်ငံသားများနှင့်ခရီးသွားဧည့်များ၏အာရုံစိုက်မှုများ၏အာရုံစူးစိုက်ခဲ့သည်အထိနိုင်ငံတကာတူရကီOlimpiyatları`Nဓာတ်ပုံနဲ့အတွက်မှန်ဘီလူးတွင်ထင်ဟပ်။ အိုလံပစ်ခရီးသွားဧည့်ဓါတ်ပုံတွေကိုကြည့်ရှု, ဓာတ်ပုံတွေတူရကီအိုလံပစ်ဆန်းစစ်အကျိုးစီးပွားအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ တူရကီအိုလံပစ်အနုပညာÇalışmaları`NAyça Hajar Salman ကနေစာနယ်ဇင်းအရာရှိများ, ဒီနှစ်တူရကီအိုလံပစ်ဓာတ်ပုံ Sergisi`N အဆိုပါ 10 ။ မှုမှတစ်နှစ်လျှင် "ဇာတ်လမ်း၏ဆယ်ပါးဆယ်ပါးမျက်နှာ," ဟုသူကအမည်ပေးခြင်းကဆိုသည်။ အစ္စတန်ဘူလ်, တူရကီနှင့်ထိုကဲ့သို့သော Izmir Salman လွှဲပြောင်းအဖြစ်ကြီးမားသောမြို့ကြီးတွေမှာကျင်းပဓာတ်ပုံပြပွဲနှင့်အတူအလွန်ကျေနပ်ခဲ့ပါတယ်အတွက်နိုင်ငံသားများ, သူတို့ကလူမှုမီဒီယာများ၏အလွန်အပြုသဘောဆောင်တဲ့တုံ့ပြန်ချက်အသွင်ပြောင်းလက်ခံရရှိကဆိုသည်။ Salman; "အလွန်ပျော်ရွှင်စိတ်လှုပ်ရှားကျွန်တော်တို့ကိုပြန်သွားပါ။ နောက်ထပ်နေရာများအတွက်လာမယ့် Olimpiyatlar` အတွက်မျှော်လင့် ...
min ကစားသမား PTT ကအလုပျသမားနှင့်အတူအဝေးပြေးကားကန်ထရိုက် Kit မှပေးအပ်ခြင်းခံရကြလိမ့်မည်နည်း
Kars အတွက်ခင်းကျင်းပြသ Karabekir Kazim Pasha White က Wagon
ခင်းကျင်းပြသသမိုင်းဝင်ခေါငျးလား? အပိုင်းအစပစ်ချခံခဲ့ရသလား? (ဓာတ်ပုံပြခန်း)
Kars, Kars ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးရေးစင်တာနှင့်စစ်ဆေးရေးစခန်းထဲမှာတွေ့ Apaydin
အဆိုပါဥရောပအာရှရထား Wagon Medlog မှာ Display ကိုအပေါ်ပြပွဲ
၏လိမ္မာပါးနပ် Alasya ရထား diorama ပြပွဲ
တစ်ဦး Mini-ပြတိုက်အတွက် display ကိုအပေါ်နှင်းလျှောစီးကိရိယာတစ်ခုရာစု
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ အောက်တိုဘာလ 2019 (139) စက်တင်ဘာလ 2019 (555) သြဂုတ်လ 2019 (508) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (974) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)